Iindaba -FOSHAN CITY SHUNDE MINGANFENG MOLD CO., LTD
I-FOSHAN CITY SHUNDE MINGSANFENG MOLD CO., LTD
Inombolo Booth: 14 B61
Ukumema ukuba undwendwele iCHINAPLAS 2021
Siyakumema ngokufudumeleyo Inkampani Ukutyelela umnquba wethu Imvelaphi yegama lokuqala Chinas 2021, eya kubanjwa ngomhla 13‐16 UCanzibe 2021 e China Ngenisa & Thumela ngaphandle Kulungile Zintsonkothile, Shenzhen,Guangdong PR China.
Ukuba ziindwendwe zethu, imali yokungena kwi-CHINAPLAS 2021 nge-RMB80 ngomntu ngamnye (kutyelelo lweentsuku ezi-4 show) ziya kurhoxiswa. Nceda undwendwele ikhonkco elingezantsi ngaphambili13 UTshazimpuzi 2021, 10:00 (ixesha laseBeijing) ukugcwalisa ubhaliso lweendwendwe, kunye nokufaka iKhowudi yokungena yasimahla ngexesha lenkqubo yobhaliso ukonwabela ilungelo lakho lokundwendwela simahla.
Ukuhambelana nokukhula kweeplastikhi zase China kunye nemizi-mveliso yerabha ngaphezulu kweminyaka engama-30, i-CHINAPLAS iye yaba yintlanganiso neqonga loshishino kula mashishini kwaye ikwan negalelo elikhulu kuphuhliso lwabo oluchumileyo. Okwangoku, i-CHINAPLAS yeyona nto iphambili kwiplastiki kunye nerhwebo lokurhweba, kwaye ikwabonwa ngokubanzi lishishini njengenye yemiboniso eneempembelelo kwihlabathi. Ukubaluleka kwayo kudluliswa kuphela yi-K Fair eJamani, iiplastikhi zenkulumbuso zehlabathi kunye nentengiso yorhwebo yerabha.
Umsitho ovunyiweyo we-UFI
I-CHINAPLAS iqinisekisiwe "njengoMsitho ovunyiweyo we-UFI" nguMbutho weHlabathi weShishini leMiboniso (i-UFI), iqumrhu elaziwa kwilizwe liphela lecandelo lezentengiso. Oku kuvunywa kwakhona kubonisa irekhodi eliqinisekisiweyo le-CHINAPLAS njengomnyhadala wamazwe aphesheya, kunye nemigangatho yobungcali yomboniso kunye neenkonzo zokundwendwela kunye nolawulo lweprojekthi esemgangathweni.
Kuvunywe yi-EUROMAP e-China
Ukusukela ngo-1987, i-CHINAPLAS ifumene inkxaso eqhubekayo kwi-EUROMAP (IKomiti yase-Yurophu yabavelisi boomatshini bePlastikhi kunye neeRubber Industries) njengoMxhasi. Kuhlelo lwe-2021, iya kuba lushicilelo lwama-31 ngokulandelelana lokufumana i-EUROMAP njengomxhasi okhethekileyo e-China.
Kwi-CHINAPLAS 2021, unokufumana
Izisombululo zemveliso ezisebenza ngokubalaseleyo zibonelelwa ngabantu abayi-3 500+ abavela kwihlabathi liphela Ubuchwephesha obuninzi obushushu kunye nobokuqala, kunye neeseti ezingama-3800 + zoomatshini ekuboniseni ulwazi lwakamuva lwentengiso kunye neendlela eziba nefuthe kuphuhliso lweshishini lwexesha elizayo
Ukufumana ezinye iindaba malunga nokulunga, nceda undwendwele www.CinaplasOnline.com
Ndijonge phambili ukukubona kwiCHINAPLAS eShenzhen!
I-FOSHAN CITY SHUNDE MINGSANFENG MOLD CO., LTD.